Okujwayelekile - i-Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd.
IGuangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd yasungulwa ngonyaka we-2009, lapho-ke isungule ibhizinisi lokuhlanganiswa ngensika yomkhakha wezokukhiqiza nocwaningo, ezentengiselwano ngogesi, ukuhlanganisa ukuthengwa kwezipho nokusebenza komkhiqizo.
Izinsizakusebenza zethu ezihlanganisiwe nezinzuzo ngobuqotho, ukholo nokulangazelela. Sekuyiminyaka eminingana, uMeiling ezuze ukukhula okuzinzile kombuso ngokuhlola imodi yebhizinisi ngenkathi ye-inthanethi, ebambisene namabhizinisi aziwayo asekhaya naphesheya kwezilwandle. Njengamanje, uMeiling unemikhiqizo eminingi ye-intanethi- iKonka, Changhong, Nontaus, Daewoo, TER, MAK, BTSM. Ngamunye wabo unesikhundla sakhe semakethe, ukwanelisa ngokwedlulele isipiliyoni sabasebenzisi abavela emikhakheni eyahlukahlukene futhi wakhe ngempumelelo ipulatifomu ye- "Meiling Internet +". Esikhathini se-inthanethi, i- "Meilling Internet +" ineqhaza ekuguquleni ibe ibhizinisi le-Intanethi langempela, ukudala ngokuhlanganyela ukunqoba i-exosphere ngokuncintisana okuyisisekelo kobuqotho.Ukukhula okungaphezu kweminyaka eyi-10, sinolwazi ku-ODM naku-OEM. Ngomkhiqizo wethu we-premium nensizakalo, sisungule ukubambisana okuhle kwebhizinisi namakhasimende emakethe yasekhaya naphesheya kwezilwandle.
I- “Meiling Internet +” nakanjani izoba umhlahlandlela wemodi yebhizinisi eguquguqukayo ngokuzayo.
UMeiling ungumhlinzeki oqeqeshiwe wezinto zasendlini ikakhulukazi kufaka phakathi izinto ezisetshenziswayo zasekhishini, izinto ezisendlini, umoya opholisayo, inzalo nokuhlanzwa, besisebenza kumishini yasekhaya eChina iminyaka engaphezu kwengu-10. Ngaphandle kokudala i-Internet + enamandla futhi evelele ye-Ecological System. Sinezinketho ezenziwe ngezifiso ukusiza amaklayenti ukwengeza ukuthengiswa kwawo kweziteshi ezahlukahlukene.
Ithimba lethu lokuthengisa lilwela ukwanelisa amakhasimende ngezinsizakalo ezinhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngokususelwa ebudlelwaneni bethu obuseduze namakhasimende, sihlala njalo singathola imininingwane yokuqala evela emakethe futhi sithuthukise amamodeli amasha alungile ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.Njalo ngonyaka, singathuthukisa izinto ezintsha ezingama-3-5 ngokuya ngamathrendi emakethe nezidingo zamakhasimende, okuqinisa kakhulu ukuncintisana kwethu emakethe ngokuya ngesilinganiso sethu esinengqondo. Ukukhula okungaphezu kweminyaka eyi-10, sinolwazi ku-ODM naku-OEM. Ngomkhiqizo wethu we-premium kanye nensizakalo, sisungule ukubambisana okuhle kwebhizinisi namakhasimende ezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe bamukelekile ngokufudumele. Uma unesithakazelo kunoma yiziphi izinto zethu noma udinga olunye ulwazi, pls ungangabazi ukuxhumana nathi. Sibheke phambili ukubambisana nawe esikhathini esizayo esiseduze.
Ukuncintisana Kwemakethe Yase-Oversea
Ukuthuthukiswa Komkhiqizo & Tech.Support